Ukonga nezomnotho wasekhaya | Ezezimali Ezezimali (Ikhasi 2)
Ukuziphilisa akulula, kepha kuphambene impela, ngakho namhlanje sikhuluma ngendlela yokonga imali futhi sikhululeke kakhudlwana.
Uma uzibuza ukuthi ungayenza kanjani imali, lapha sizokunikeza imibono engakwenza ube nokungeziwe ekupheleni kwenyanga.
Thenga ikhaya noma okungcono ngokuqasha?
Omunye wemibuzo efanelekile ozozibuza wona ngesikhathi esifanele sokuzimela ukuthi ngabe kungcono yini kuwe ukuthi uthenge ifulethi noma, kunalokho, isisombululo esihle kakhulu sizosekelwa ekuqashiseni.
Kubiza malini umshado?
Kunolwazi oluningi olutholakalayo lokubonisana nokuba nesithenjwa sokuthi izindleko zomshado zibiza malini, kubaluleke kakhulu lapho kwenziwa umshado
Uma kwenzeka ungazi ukuthi iyini inombolo yakho yokuphepha komphakathi, sizokunikeza uchungechunge lwamathiphu amancane ukuze ukwazi ukuyithola ngokushesha
Imininingwane yakamuva mayelana nokuthengiswa komakhalekhukhwini eSpain ikhombisile ukuthi amadivayisi waseChina athola indawo ngokuthandwa ngabasebenzisi. Kungani ama-mobiles amaShayina enqoba eSpain?
Ungayenza kanjani i-invoyisi?
I-invoyisi idinga amagama aqinile futhi lokho kufanele kusebenze engxenyeni enhle yosomabhizinisi nabasebenza ngokuzimela
I-IBI intela eqondile ethinta bonke abanikazi bamakhaya, amagaraji noma amagceke ezentengiselwano futhi enokubuyekezwa okujwayelekile
Kunemali engamaphepha eyizigidigidi eziyi-15, kukhona ukuthi kwesinye isikhathi kumele sibe khona lapho kukhona imali engamanga.
Ukonga umkhuba owenziwayo, umkhuba ongajwayelekile ukuthola, abantu abaningi banezikweletu noma ngezindleko ezidlula imali abayitholayo
Umnqamulajuqu wokucela ukungasebenzi
Ukuntuleka kwemisebenzi kuyisimo esinzima kulabo ababhekene naso, futhi ikakhulukazi ngezikhathi lapho umcimbi usimangaza.
Indlela yokwenza isabelomali
Lo mbhalo wenzelwe ukuthi usebenze njengomhlahlandlela ojwayelekile wokwenza isabelomali sakho, ukuze izimali zethu zithuthuke
Okufanele ukwenze uma ukungasebenzi kwakho kuphela
Into yokuqala okufanele ibhekwe ukuthi inzuzo yokungasebenzi noma ukungasebenzi kunemikhombandlela ethile esebenza kuyo.
Amathiphu wokuxhasa ngemali imoto yakho
Ngenxa yezindleko zayo, enye yezindlela eziyintandokazi yokuthola imoto ukuyikhokhela ngemali; le nqubo inezinzuzo nezinkinga
Izimali zezingane zakho kanye nemfundo yazo yezezimali
Ezinye izeluleko ngokuthi yiziphi izihloko ezingabhekiswa nezingane, nokuthi kufanele zibhekwane kanjani ukuze usana luziqonde
Izinhlelo zokusebenza zokulawula izindleko zansuku zonke
Uma ungathanda ukulawula ukusetshenziswa kwemali nsuku zonke osukwini lwakho kodwa ucabange ukuthi kungahle kube nomzamo omkhulu nokusebenzisa isikhathi sakho esibalulekile
Izintela ezibanjwayo eSpain
Izindlela ezingcono zokudonsa intela ngesitatimende semali engenayo; kepha, ukudonswa kwentela akuvulelekile kuwo wonke umuntu
Indawo yokuhlala yomkhokhi wentela yigama elichazwa yi-Agency Agency njengaleyo ndawo yokuhlala egcwalisa izidingo ezilandelayo
Ukugembula: utshalomali noma umdlalo?
Ukugembula nge-Intanethi kungaba yisilingo sokuwina imali, kepha ngaphansi kwanoma yiziphi izimo akufanele ukubheke njengokutshala imali
Ukukhanya kushibhile nini
Umthethosivivinywa kagesi ungenye yezinto ezizondwa kakhulu ngabaseSpain, futhi akuyona encane: sineminyaka yokwenyuka okuqhubekayo kwentengo kagesi.
Uma ufuna ukonga imali ebudlelwaneni bakho nebhange, ngeke ube nenye into ngaphandle kokuthola ngokujulile ngemikhiqizo nezinsizakalo zabo.
Mooverang, uhlelo lokusebenza ukusindisa nokulawula izindleko zakho nge mobile yakho
Yonga kufika kuma-euro ayizi-2.000 XNUMX ngonyaka nge-Mooverang, uhlelo lokusebenza oluhlaziya izindleko zakho zansuku zonke futhi likunikeze amafomula wokonga owenzelwe wena uqobo. Ingabe uyonga
Amakhomishini amasha aqala ukukhipha imali kuma-ATM. Thola ukuthi kuzobiza malini ebhange ngalinye
Namuhla sizokunikeza isifinyezo esihle sabo bonke opharetha bezingcingo abashibhile eSpain nokuthi yiziphi ezikunikeza izinzuzo ezinhle kakhulu
Ngokwesimo lapho sichitha khona isikhathi esiningi ekusebenziseni, ukuhweba ngogesi kungaba ithuluzi lokukunciphisa.
IBlack Friday ingaba ithuba elihle lokonga, kepha kuzofanele ulandele izinkombandlela ezithile ukuze ungaweli ekusebenziseni okungacabangi.
I-Iceland namandla ahlanzekile
Umnotho wase-Iceland ukhula ngo-3% njalo ngonyaka kanti izinga lokungasebenzi kwalo lingaphansi kuka-5% ngenxa yenqubomgomo yawo yamandla ahlanzekile
Namuhla kunanini ngaphambili kubalulekile ukuthi wazi izinguquko ezimalini zezwe lakho nase ...